Ukungenzi isenzo kweSpain Esivumelwaneni saseParis kugxekwa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukungenzi isenzo kweSpain Esivumelwaneni saseParis kuyagxekwa
Isivumelwano SaseParis Kungumcimbi oyingqophamlando lapho amazwe angaphezu kuka-103 evumile ukwehlisa ukukhishwa kwamagesi abamba ukushisa. Ngale ndlela, imithelela yabantu esimweni sezulu iyancipha futhi nemiphumela emibi yokuguquka kwesimo sezulu iyancipha.
Kodwa-ke, kule mpi yokulwa nokuguquka kwesimo sezulu ebonakala ingumlando futhi iba nemiphumela emihle emhlabeni wonke, iSpain ayibonakali ibamba iqhaza. Ngaphandle kokuthi iSpain ingelinye lamazwe abasengozini kakhulu Ebhekene nemiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu, ayikasigunyazi iSivumelwano SaseParis.
Izinhlangano ezinkulu zemvelo zaseSpain zikugxekile ukungasebenzi kahle okwenziwe yiSpain engqungqutheleni yezulu ebibanjelwe eMarrakech (COP22). Uhulumeni waseSpain oholwa ngu Mariano Rajoy asikasifakazeli isivumelwano. Ngenxa yokuthi iSpain ibisiphethe uhulumeni izinyanga eziyishumi, isivumelwano asikaqinisekiswa. Ngokuphambene nomsebenzi omuhle wobuchwepheshe weHhovisi Lokushintsha Kwesimo Sezulu, umlando wezepolitiki kaHulumeni kule COP awutholi ukuvunywa. Iqiniso lokuthi uMongameli Mariano Rajoy akazange aye engqungqutheleni yesimo sezulu likuqinisekisile ukuthi, ezinhlelweni zakhe, ukuguquka kwesimo sezulu kwehliselwe esigabeni se-anecdote.
Ngokusho kwezinhlangano zemvelo ezibaluleke kakhulu zaseSpain ezifana I-Greenpeace, Abangane Bomhlaba, Izazi Zemvelo Zisebenza, i-WWF ne-SEO / i-BirdLife, ISpain ibiyile engqungqutheleni yesimo sezulu njengoba yenze nengqungquthela yaseParis. Lokho wukuthi, ngaphandle kwenqubekela phambili ezindabeni zokuguquka kwesimo sezulu.
Uhulumeni waseSpain usemuva ezindabeni zokuguquka kwesimo sezulu. Idlulwa ngamazwe anjengeJalimane, iFrance, iPortugal, iSweden noma i-post-Brexit United Kingdom uqobo.
Ekupheleni kwengqungquthela yesimo sezulu iMarrakech, abezemvelo bavumile ukubiza wonke amabutho ezepolitiki nabamele iPhalamende eSpain ukuthi baguqule impi elwa nokuguquka kwesimo sezulu. "Emgudwini ophakathi kwalesi Sishayamthetho sokuvumelana", ngoba "kungaba ukwehluleka kwawo wonke umuntu ukube bekungenjalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukungenzi isenzo kweSpain Esivumelwaneni saseParis kuyagxekwa
I-Tenerife idala iziteshi zokuqapha izintaba-mlilo ezintsha
Izinhlekelele zemvelo zikhiqiza abantu abampofu abayizigidi ezingama-26 ngonyaka